Dad Careysan oo Ku Hor Banaan Baxay Xafiiska Theresa May – Balcad.com Teyteyleey
Dad Careysan oo Ku Hor Banaan Baxay Xafiiska Theresa May
Boqolaal qof oo ka careesnaa sida dowlada Britain uga fel celisay dabkii xooganaa ee dhawaan qabsaday dhismo kuyaala magaalada London ayaa ku hor banaan baxay xafiiska magaalada London ku leedahay Ra’isul Wasaare Theresa May.
Banaan baxayaasha oo watay boorar ay halku dhigyo kala duwan ku qornaayeen ayaa ka codsanayay Ra’isul Wasaaraha Britain in ay is casisho, waxa ayna ku eedeeyeen sida ay uga fel celisay dabkii ka kacay dhismo dheer oo kuyaala London.
Dabkii qabsaday dhismaha Grenfell ee magaalada London waxaa ku dhintay dad gaaraya 30-qof, waxaa sidoo kale waxyeelo uu dabkaasi gaarsiiyay dad kale oo kamid ahaa dadkii deganaa dhismahaasi dabka xoogan uu qabsaday.
Ra’isul Wasaaraha Britan Theresa May ayaa sheegtay in ay ka xun tahay khasaaraha ka dhashay dabka dhishmaha Grenfell kacay, waxa ayna xustay in lix Malyan oo Dollar wax loogu qabanayo dadkii waxyeelada kasoo gaartay dabkaasi.
The post Dad Careysan oo Ku Hor Banaan Baxay Xafiiska Theresa May appeared first on Ilwareed Online.
Sheekh caan ka ah Baydhaba oo lagu dhex dilay isagoo ku sugnaa masjid